इटालियन मेयरले कोरोनाभाइरससँग लड्न फ्लेमथ्रोभर्स पठाउने धम्की दिए: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	26 मार्च 2020 मा	• 14 टिप्पणिहरु
राजनीति र मिडिया मार्फत फैलाउने शासनको वास्तविक अनुहार भनेको के हो नियन्त्रणको विरोध? इन्द्रेणी प्रतीक याद गर्नुहोस्। इन्द्रेणी गोप्य रूपमा नयाँ विश्व अर्डर को प्रतीक हो? के संसार नूहको समयमा जस्तै कोरोना ज्वारको लहरले बाढी आएको छ? जलप्रलयपछि के देखा पर्‍यो? इन्द्रेणी?
"हामी फ्लेमेथ्रोवर्स पठाउँदछौं!" यस इटालियन मेयरलाई नक्कल गर्नुहोस्।
अब हामी सोच्दछौं कि हामीले यसलाई शाब्दिक रूपमा लिनुहुँदैन, तर यदि यो शाब्दिक रूपमा हुँदैछ भने के हुन्छ? यस मेयरको मुखबाट आएको धम्की दिने भाषामा हेर्नुहोस्। के मन्त्री ग्र्यापरहसले मिडियामार्फत कोरोनाभाइरसलाई 'अनियन्त्रित' र 'यो हातबाट निस्कदैछ' भनेर व्यवहार गर्न सुरु गर्नेछन्? "किनभने तपाईं सुन्नुहुन्न र भित्र बस्नुहुन्न!"
के तपाईंलाई सम्झना छ? यो चेतावनी नोभेम्बर २०१ from बाट?
मेरो पुस्तक र धेरै लेखहरूमा (नि: शुल्क पढ्नयोग्य) यहाँ साइटमा मैले वर्णन गरे कि इन्द्रेणी नयाँ विश्व व्यवस्थाको ईश्वरको प्रतीक हो। लुसिफर। नयाँ विश्व अर्डर लुसिफरको समानतामा विश्वको लागि प्रयासरत छ। लुसिफरका लागि प्रतीक बाफोमेट हो: हर्म्याफ्रोडाइट (उभयलिंगी वा 'लि neutral्ग तटस्थ') चिमेरा बक (पढ्नुहोस् यहाँ केही chimerism छ)।
“मैले उनलाई रोकें र भने, 'हेर, यो फिल्म होइन। तपाई विल स्मिथ आई एम लिजेन्डमा हुनुहुन्न। घर जाऊ। ”
यो इटालियन मेयरहरूको अद्यावधिक कम्पाइलेसन हो जसले यो उल्ल at्घन गरेकोमा हराउँछ # कोविड १। संगरोध हो, उपशीर्षकहरू सहि छन्। pic.twitter.com/60V4Csuonb
- 🌈 (@protectheflames) मार्च 22, 2020
भिन्सेन्जो डे लुका, इटालेली शहर क्याम्पानियाका मेयर
ट्याग: महापौर, कोरोनाभाइरस, de, विशेष, Italiaanse, इटाली, LUCA, सुरक्षा, इन्द्रेणी, वर्षापुस्तक, को, Vincenzo, flamethrowers
26 मार्च 2020 मा 10: 26
अहिले हामी कहाँ छौं? भिडियोमा मिनेट :3:१:17
26 मार्च 2020 मा 23: 49
मलाई लाग्छ बिहान :3: .० मा जब कसैले कोर्विड लक्षण मध्ये एकबाट पीडित हुने धम्की दिन्छ।
26 मार्च 2020 मा 11: 30
केही भिडियो गेमहरू खेल्नुहोस्, कानून प्रवर्तन अधिकारीहरू मध्ये एक भन्छन्।
डब्ल्यूएचओ सहित केही विद्वानहरू अब भन्दैछन् कि विशाल "भर्चुअल वास्तविकतामा उछाल" देखा परिरहेको छ जहाँ सबै "खेलहरू" विकसित र धेरै सुधारिएको छ, उनीहरूको बैठक कोठामा जो बाध्य छन् वा तथाकथित "स्वैच्छिक" पृथकमा वर्चुअलमा छन् संसारहरू सार्न सक्दछन् जुन वास्तविक चीजबाट भिन्न छन्। भर्चुअल संसारका माध्यमबाट बच्चाहरूलाई सिकाउने कार्यक्रमहरू पनि प्रस्ताव गर्न सकिन्छ ताकि भविष्यमा उनीहरू वास्तवमै स्कूलमा जानुपर्दैन तर एक “भर्चुअल क्लासरूम” मा जान्छन् जहाँ उनीहरू वास्तवमा सिकाउने भर्चुअल शिक्षकबाट अन्य बच्चाहरूसँग पाठ प्राप्त गर्न सक्दछन्, र वास्तवमा के वास्तविक छैन छुट्याउन सकिने छ।
भनिन्छ कि यस्तो आशा गरिएको छ कि निकट भविष्यमा मानिसहरू स्थायी रूपमा अलग्गै बस्नुपर्नेछ किनकि भाइरसहरूले पप्पिंग गरिरहन्छन्, तर वायरल वास्तविकतासँग यो कुनै समस्या होइन र मानिसहरूले बाहिर जान पनि चाहँदैनन् किनभने भर्चुअल संसारहरू सत्य छन्। तिनीहरू वास्तविक कुराबाट जटिल हुन सक्दछन्।
त्यसैले transhumanism पनि धेरै यी तथाकथित लकडाउन र आत्म अलगाव को माध्यम बाट प्रचारित छ र चाँडै नै धेरै सामान्य र धेरै धेरै उन्नत हुनेछ।
26 मार्च 2020 मा 12: 03
र साना बच्चाहरूलाई अहिले भालू कसरी पक्रने भनेर सिकाइएको छ। ती भालुहरूलाई 'धम्की दिने तत्वहरू' को साथ बदल्नुहोस् र तपाइँ त्यो अनुप्रयोगमा के देख्नुहुन्छ?
26 मार्च 2020 मा 13: 00
चिसो भएका नर्सिंग स्टाफ र महत्त्वपूर्ण रोजगार भएका व्यक्तिहरू सहजै काम गर्न सक्छन्।
26 मार्च 2020 मा 13: 24
नेदरल्याण्ड्सका धेरैजसो अवकाश घरहरूमा केही ढोका बाहिर पिन कोड लक हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा, ठूलो व्यक्तिले भित्रबाट ढोका खोल्न सक्दैन। त्यो आधुनिक प्रविधि हो। यदि कोरोनाभाइरस संदिग्ध छ भने, ढोका लक गर्न सकिन्छ। सामान्यतया त्यस्ता नर्सिंग होमको नजीक एउटा चिहान हो। सबै भन्दा पछि, यो प्राय: अन्तिम स्टेशन हुन्छ। बच्चाहरू अब भेट्न सक्दैनन्। लकडाउन। भाग्यवस, तिनीहरू राम्रो हेरविचारमा भर पर्न सक्छन्। नर्सि staff स्टाफले प्रोटोकलको राम्रोसँग पालन गर्दछ र सम्भवतः संक्रमित बुढा व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको कोठामा राख्छ .. अन्यथा तपाईं संक्रमणको जोखिम चलाउनुहुन्छ (र तपाईं अलग्गै हुनुपर्दछ) वा अन्य बुढा व्यक्तिहरू संक्रमित हुन्छन् ... तपाईं चाहनुहुन्न। प्रयोगशालाबाट फिर्ता आउने फारमले कहिलेकाहिँ "कोरोनाभाइरस सकारात्मक" भन्छ। यस्तो अप्ठ्यारो व्यक्तिलाई लक गर्ने कष्टप्रद छ, तर हो .. "यो हुनुपर्दछ, रमाईलो छैन, तर कसले प्रयोगशालाको नतिजाको विरोधाभास गर्न सक्दछ? तपाईं प्रोटोकलमा टाँसिनुहुन्छ ... "
ह्यारी मेन्स वास्तवमा कस्तो हुनेछ?
26 मार्च 2020 मा 13: 26
26 मार्च 2020 मा 15: 39
ठीक छ, भिन्सेन्जो डे लुका। त्यहाँ पनि एक छ। तिनीहरू इटालीमा पनि प्रमुख पदहरूमा छन्। सबै चीज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र हेन द्वारा निर्देशित छ। तिनीहरू सबै कुरा देख्दछन्, उनीहरू सबै कुरा निर्धारण गर्छन्, तिनीहरू सामान्य हुन्, तिनीहरू विज्ञहरू हुन्, तिनीहरू प्रेस हुन्, तिनीहरू सब भन्दा शक्तिशाली हात इत्यादि हुन्। हामी तिनीहरू द्वारा शासित तानाशाहीमा छौं। हामी, साधारण मानिसहरू कसरी तिनीहरूबाट छुटकारा पाउन सक्छौं?
मानव हुनु लेखे:
26 मार्च 2020 मा 17: 34
सबै भन्दा पहिले म धेरै बर्षौं insightful लेख को लागी धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईंको कामलाई समर्थन गर्न, तर पुस्तकको सामग्रीको लागि पनि, मैले यसलाई अर्डर गरें। म आशा गर्दछु कि पृथ्वीमा प्रत्येक व्यक्ति उसले के गरिरहेको छ ऐनामा हेराई गर्न सक्दछ र जीवनको सार के हो भन्नेमा गहिरो सोच्न सक्छ।
म यस व्यस्त समय मा सबैलाई एक धेरै शक्ति, बुद्धिमत्ता र सबै स्वास्थ्य चाहान्छु।
26 मार्च 2020 मा 22: 40
कोरोना भाइरसको लागि परीक्षण नक्कली छ!
27 मार्च 2020 मा 07: 09
लि an्कको माध्यमबाट मात्र एक महत्त्वपूर्ण टुक्रा jhonny संलग्न।
CDC २०१ 2019-उपन्यास कोरोनाभाइरस (२०१--nCoV) वास्तविक-समय RT-PCR डायग्नोस्टिक प्यानल एक वास्तविक समय RT-PCR परिक्षण हो जुन माथि-र तल्लो श्वासप्रश्वासनको नमूनाहरूमा 2019-nCoV बाट न्यूक्लिक एसिडको गुणात्मक पहिचानको लागि हो। 2019-nCoV क्लिनिकल र / वा एपिडेमियोलोजिकल मापदण्ड पूरा गर्ने व्यक्तिहरूबाट संकलन गरिएको नासोफरेन्जियल वा ओरोफरेन्जियल स्वाब्स, स्पुटम, तल्लो श्वास नलीको श्वासप्रश्वास, ब्रोन्कोवालियोलर लाभाज, र नासोफ्यारेन्जियल धो / आकांक्षी वा नाक एस्पिरिएट (उदाहरणका लागि, क्लिनिकल संकेत र लक्षणहरू २०१-- nCoV संक्रमण, सम्भावित वा पुष्टि गरिएको 2019-nCoV केसको साथ सम्पर्क, भौगोलिक स्थानहरूमा यात्राको इतिहास जहाँ २०१ 2019-nCoV केसहरू पत्ता लागे, वा अन्य एपिडिमियोलोजिक लिंकहरू जसका लागि २०१२-nCoV परीक्षण सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसन्धानको एक भागको रूपमा संकेत गर्न सक्दछ)। संयुक्त राज्य अमेरिकामा टेस्टिंग उच्च जटिलता परीक्षण गर्न १ 2019 2019 (सीएलआईए), US२ यूएससी § २2019 ए को क्लिनिकल प्रयोगशाला सुधार संशोधन अन्तर्गत प्रमाणित प्रयोगशालाहरू मात्र सीमित छ।
परिणामहरू 2019-nCoV RNA को पहिचानको लागि हो। २०१ n एनसीओवी आरएनए संक्रमणको समयमा सामान्य रूपमा माथिल्लो र तल्लो श्वसन नमूनाहरूमा पत्ता लगाउन योग्य हुन्छ। सकारात्मक परिणामहरू २०१--nCoV को साथ सक्रिय संक्रमणको सूचक हो तर ब्याक्टेरिया संक्रमण वा अन्य भाइरसहरूको सह-संक्रमणलाई इन्कार गर्दैनन्। एजेन्ट पत्ता लगाई रोग को निश्चित कारण हुन सक्दैन। संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका क्षेत्रहरु भित्र प्रयोगशालाहरु लाई सबै सकारात्मक परिणामहरु लाई उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारीहरु लाई रिपोर्ट गर्नु पर्छ।
नकारात्मक नतिजाले २०१ 2019-nCoV संक्रमणमा बाधा पुर्‍याउँदैन र उपचार वा अन्य बिरामी व्यवस्थापन निर्णयहरूको लागि एकल आधारको रूपमा प्रयोग गरिनु हुँदैन। नकरात्मक नतिजा क्लिनिकल अवलोकन, बिरामी ईतिहास, र महामारी विज्ञान जानकारी संग मिल्नु पर्छ।
हामी भाइरस परीक्षणबाट फाइदा गर्दैनौं। उपचार योजना कसरी निर्धारण गरिन्छ र कुन औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ? प्रोटोकल? यो बिरामीहरु लाई डाक्टरहरु द्वारा प्रयोग गर्नु जस्तै हो र उपचार सही छ कि छैन भनेर हेर्नु जस्तै हो। प्रश्न यो छ कि बिरामीहरू यसका कारण बिरामी हुँदैनन्। बुझ्नुहोस् कि डाक्टरहरू र नर्सहरूले सँधै मास्क लगाउँदैनन् र त्यसैले सम्भावित कोरोना बिरामीहरूलाई पनि रोग / रोग सार्न सक्छ। र कहिलेकाँही कार्य जारी राख्नुहोस् जब उनीहरूसँग सम्भावित कोरोना हुन्छ। के बिरामीहरू अन्ततः कोरोना वा अरू कुनै चीजबाट मर्नेछन्? कुइ बोनो? ठ्याक्कै, विश्व सुधार गर्ने सामाजिक ईन्जिनियरहरू।
27 मार्च 2020 मा 00: 36
@ मार्टिन सन्देशमा प्रतीकात्मकता (रूपरेखा) थप बाहेक, यी नेताहरू वा पीडितहरूको शरीर भाषा / अनुहारको अभिव्यक्तिमा पनि ध्यान दिनुहोस्।
भावना र अन्तस्करणको अभावमा, साँचो अभिप्राय अनुहारमा व्यक्त गरिएको छ
साथै लोकप्रिय के मुटु भरिएको छ ...
एक लुसिफेरियन मुटुले आँखा / अनुहार अभिव्यक्ति र शरीरको भाषामा आफैलाई देखाउँदछ।
हाम्रो मानसिकतामा "अन्धा स्थान" को अस्तित्वको कारण, हामी मान्दछौं (हामी सुझावहरूको लागि खस्छौं) कि एक मैत्री अख्तियार मित्रैलो व्यक्ति / हृदय हो। अनुहार मानको सही अर्थ।
हामी त्यस्तो समयमा आइपुगेका छौं जब व्यक्तित्व (व्यक्तित्व = मास्क) तिनीहरूको वास्तविक अनुहार देखाउँदछ।
यो लिंकले गहिरो सीसा र उदाहरण प्रदान गर्दछ। चेतनाबाट अनुहार मान्यता
एक छेउमा: एआई एक अत्यधिक प्राथमिक विचार हो वा मानव क्षमताको एक प्रतिलिपि हो। कम्प्युटरले (h) सत्य पहिचान गर्न आवश्यक छैन। तर जबसम्म प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक पहिचान (मानसिकता) पुनः प्राप्त गर्दैन, उसले बाह्य अधिकारको लागि बिन्ती गरिरहन्छ।
28 मार्च 2020 मा 07: 33
गोर्डन ब्राउनले विश्वव्यापी सरकारलाई कोरोनाभाइरससँग जुध्न आग्रह गर्दछ
पूर्व प्रधानमन्त्री २०० 2008 को बैंकको उद्धारको केन्द्रमा नेता र स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूको कार्यदल सुझाव दिन्छ
हो, सामान्य संदिग्धहरूको एजेन्डा बढ्दो रूपमा आउँदैछ
« ट्रम्प, क्यू-अनन र 'गहिराइमा सफा गर्दैछ' मिथक (रोबर्ट जेन्सेन, जेनेट ओस्सेबार्ड)
के विपरीतलिंगी पुरुषहरू कोरोनाभाइरसको मुख्य लक्ष्य हो? वैज्ञानिक आधार »
कुल भ्रमण: 1.280.643
मार्टिन भिजल्याण्ड op 'क्याबलको पतन' बकवास र 'क्यू अनन' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers) को हुन्?
Ramon op 'क्याबलको पतन' बकवास र 'क्यू अनन' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers) को हुन्?
SalmonInClick op 'क्याबलको पतन' बकवास र 'क्यू अनन' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers) को हुन्?
ह्यारी फ्रिज op 'क्याबलको पतन' बकवास र 'क्यू अनन' Inoffizieller Mitarbeiter (IMB'ers) को हुन्?